Kenya oo askar badan ku weysay weerar Alshabaab ku qaadeen Mandera – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Kenya oo askar badan ku weysay weerar Alshabaab ku qaadeen Mandera
Mandera – Mareeg.com: Khasaaraha ka dhashay weerar hubeysan oo shalay Alshabaab ku qaadday gudaha Kenya, gaar ahaan deegaan ka tirsan Mandera ayaa kordhay.
Weerarka oo markii hore ku bilowday dhaca 3 gaari oo qaad siday oo boolisku dabagaleen, ayaa waxaa xigay weerar gaadmo ah oo loo dhigay booliska.
Kooxda hubeysan ee ka tirsan Al-Shabaab ayaa duleedka magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi-bari Kenya ku dishay 12 askari oo ka tirsanaa ciidanka Kenya, iyagoo isku dayeyey iney soo qabtaan gaawri ay la tageen Alshabab, sida uu xaqiijiyay sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka booliska.
Wargeyska The Standard ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa qoray in afar kale oo ka tirsan ciidanka kaydka dalka Kenya la dhaawacay, kuwaasoo lagu daweynayo isbitaal ku yaalla magaalada Mandera.
Madaxa ciidamada booliska Mandera, Noah Mwivanda ayaa sheegay in askarta lagu dilay meel u dhow tuulada Khadiija Xaaji oo in ka yar hal kiilomitir u jirta magaalada Beled-Xaawo ee ku taalla soodhinta u dhaxeysa Kenya iyo Soomaaliya.
Alshabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarka lagu dilay 12-ka askari ee Kenyanka ah, iyadoo uuu arrintaas shir jaraa’id ka qabtay Afhayeenka uruurkaas Sheekh Cali Dheere.
Cali Dheere ayaa sheegay in ciidamo gaar ah oo ka tirsan Alshabaab gudaha u galeen Kenya, islamarkaana dileen askar gaadiid iyo hubna kazoo qaateen, wuxuuna digniin kale u diray dowladda Kenya.
“Dhowr mar ayaan Kenya u dignay oo aan dhahnay war nadaaya oo joojiya ciidankiina nagusoo duulaya, dalkeena faraha nooga qaada, balse way ka dhega adeygtay, wixii maanta dhacay iyo kuwii ka horreeyay waa qeyb yar oo kamid ah jawaab celinta mujaahidiinta” ayuu yiri afhayeenka Alshabaab, Sheekh Cali dheere.
Orodyahano Soomaaliya u matalaya tartanka ciyaaraha fudud ee Afrika